အားလပ်ရက်အငှားစာချုပ်မန်နေဂျာများသည်ကော်မရှင်များတွင် ၀ င်ငွေအမြောက်အများကိုပေးဆပ်ရန်စိတ်အားထက်သန်လာကြသည်။ ထို့ကြောင့်တိုက်ရိုက်ကြိုတင်စာရင်းပေးခြင်းနှင့်လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းထက်လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းဆီသို့ ဦး တည်သောတိုးပွားလာသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုရှိသည်။
အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များနှင့် Channel မန်နေဂျာများ တိုက်ရိုက်ဘွတ်ကင်က်ဘ်ဆိုက်များကိုဆက်ကပ်။ သို့သော်များသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ပြissuesနာများစွာနှင့်ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်တိုက်ရိုက်ဘွတ်ကင်များအတွက်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်တစ် ဦး အတွက်အခကြေးငွေရှိနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ဘွတ်ကင်များကို၎င်းတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်စီးဆင်းစေရန်ပထမ ဦး ဆုံးကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းမှတားဆီးထားသည်။ ထို့အပြင်အများဆုံး ဘွတ်ကင်အင်ဂျင် ပံ့ပိုးသူများကသင်၏ traffic ကိုထိုကဲ့သို့သော tools များမှတဆင့်အပြည့်အဝခြေရာခံရန်ခွင့်မပြုပါ Google က Tag ကို Manager ကသင်ပိုက်ဆံဖြုန်းလိုလျှင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် ကြော်ငြာ google or Facebook ကကြော်ငြာ.
ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်သင်၏အပြည့်အဝခြေရာခံရန်လိုအပ်သည် ရွယ် သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုခွဲဝေချထားပေးတဲ့သော့ချက်စာလုံးတွေကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ထို့အပြင်၊ များသောအားဖြင့် hosp ည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုဆော့ဖ်ဝဲပံ့ပိုးသူများကပေးသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကသင့်အားစိတ်ကြိုက်စာမျက်နှာများထည့်ရန်သို့မဟုတ်စနစ်မှတဆင့်ဘလော့ဂ်ပြုလုပ်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သီးခြားဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီး၎င်းမှပေးထားသောကြိုတင်ဘွတ်ကင်အင်ဂျင်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ PMS ။
Zeevou သည်တိုက်ရိုက်ဘွတ်ကင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုတိုက်ရိုက် ing ၀ ံဂေလိဆရာဖြစ်စေ၊ နာယကဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်စာအုပ်တင်ခြင်းဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုထောက်ပံ့ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ သငျသညျ built-in ရမသာ ဘွတ်ကင်အင်ဂျင် အဲ့ဒါက guests ည့်သည်တွေကိုချက်ချင်းကြိုတင်မှာကြားထားရန်ခွင့်ပြုသည်။
Zeevou Show သည် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအလိုအလျောက်ဖြည့်ပါလိမ့်မည် PMS။ သင်၏ guests ည့်သည်များအားကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်သည့်အချိန်တွင်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုပေးရန်နှင့်သင့်အားကြည့်ရှုသူများအားဘွတ်ကင်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်သင်၏အခွင့်အလမ်းများကိုအမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်ရန်ဖော်ပြချက်များ၊ ရုပ်ပုံများ၊
Zeevou သည်စနစ်၊ သင် ၀ င်ရောက်သောတိုင်းပြည်၊ မြို့နှင့်ပစ္စည်းတိုင်းအတွက်စာမျက်နှာတစ်ခုထုတ်ပေးသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လုပ်ပေးသည့်အရာမဟုတ်ပါ။ သင်စာရင်းသွင်းပြီးသောအခါ၊ သင့်အားသင်၏ဒေသရှိတရား ၀ င်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်သင်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအပြီးသတ်နိုင်သည့်နမူနာပြန်အမ်းငွေမူဝါဒနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီနမူနာကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ပေးလိမ့်မည် (ဤနမူနာကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမျှကျွန်ုပ်တို့မယူနိုင်ပါ) ။ ထို့အပြင်၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောစာမျက်နှာများကိုထည့်သွင်းရန်လည်းလွတ်လပ်မှုရှိသည်။
Zeevou အတွင်းရှိစာမျက်နှာအားလုံးတွင်သင်၏ site သည် SEO နှင့်အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန်သေချာစေရန်သင်လိုအပ်သော built-in ကိရိယာများရှိသည်။ meta ဖော်ပြချက်များ၊ သော့ချက်စာလုံးများအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုပါသည် OpenGraph Tags ဆိုရှယ်မီဒီယာမျှဝေခြင်းအတွက် (ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်ရော တွစ်တာ tags များ) ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံး၏အပြည့်အ ၀ တည်နေရာမြေပုံကိုကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းမှတစ်ဆင့်သင်မှတဆင့်တင်ပြနိုင်သည် Google Search ကို Console သင့်ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပိုကောင်းအောင်။
နှင့်အတူပေါင်းစပ်အပြင် Google AnalyticsZeevou သည်သင့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်သောဘလော့ဂ်ပြုလုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်မှတစ်ဆင့်သင့်ဒေသတွင်းရှိအကြောင်းအရာအသစ်များနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်များကိုထိန်းသိမ်းထားရန်လည်းခွင့်ပြုသည်။ သင်၏အချက်အလက်များသည်သင်၏ဘွတ်ကင်အင်ဂျင်အပြင် WordPress သို့မဟုတ် Wix ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုရှိရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုအမှတ်တံဆိပ်မျိုးစုံအောက်တွင် run လျှင်၊ သင်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ Zeevou သည်သင်စနစ်တွင်သင်တည်ထောင်ထားသောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုစီအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သင်အမှတ်တံဆိပ်များအကြားရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
သို့သော်စိတ်မပူပါနဲ့။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ထူထောင်ရန်အချိန်နှင့် / သို့မဟုတ်ပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးဖြစ်သင့်သည် WordPress ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတိုက်ရိုက်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းများပြုလုပ်ရန်၊ သင်၏ guests ည့်သည်များကိုသင်၏ဘွတ်ကင်အင်ဂျင်၏ရှာဖွေမှုရလဒ်စာမျက်နှာသို့သူတို့ကိုသင်၏ site ကိုစွန့်ခွာသွားပြီဆိုတာကိုတောင်မှမသိဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ WordPress plugin ကိုသုံးနိုင်သည်။ ထို့အပြင် Zeevou ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်သင့်ရှာဖွေရေးဝစ်ဂျက်ကိုသင့်အပေါ် embed လုပ်ရန် iFrame ကိုတီထွင်ခဲ့သည် Wix ပင်မစာမျက်နှာသို့မဟုတ်သင်တည်ထောင်ပြီးဖြစ်ကောင်းရှိသောအခြားတတိယပါတီ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်။
ကိတ်မုန့်အတွက်ရေခဲမုန့်အချို့နည်းတူသင်တိုက်ရိုက် chat option ကို Hubspot's သို့မဟုတ် Tawk.to အခမဲ့ live chat widget များထည့်သွင်းလိုပါကသင့်အားစိတ်ကြိုက် script ထည့်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ နောက်ဆုံးသင်၏ WhatsApp နံပါတ်ကိုထည့်ခြင်းအားဖြင့် Zeevouသင်၏ website ည့်သည်များသည်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်မချခင်သို့မဟုတ်အပြီး၌ရှိနိုင်သည့်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များကိုဆက်သွယ်နိုင်ရန်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် WhatsApp chat ခလုတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အလိုအလျောက်ပြသပါမည်။ သင်၏ guests ည့်သည်များကိုထူးခြားသော experience ည့်သည်အတွေ့အကြုံကိုပေးအပ်ရန်လိုအပ်သည့်ကိရိယာများသင့်တွင်ရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်း ဦး စားပေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
တိုက်ရိုက်ကြိုတင်စာရင်းပေးမှုများပိုမိုရရှိစေရန်သင်၏ဂုဏ်သတ္တိများအားလုံးကိုအခမဲ့ (set-up ကုန်ကျမှု၊ နှစ်စဉ်ကုန်ကျမှုမရှိ၊ ကော်မရှင်မရှိ - အခမဲ့!) တွင်လည်းကြော်ငြာနိုင်သည်။ Zeevou တိုက်ရိုက် သင် Zeevou မှ sign up ကိုအခါ။
ဤတွင် Zeevou မှထုတ်လုပ်သောတိုက်ရိုက်ဘွတ်ကင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ဥပမာများဖြစ်သည်။
Zeevou ရှိအဖွဲ့ ၀ င်အားလုံးသည်သင့်အားတိုက်ရိုက် Booking Revolution ကိုပြသသည့်တူညီသောပန်းတိုင်တစ်ခုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလွယ်တကူယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည် အင်္ဂါရပ်များ နှင့်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏တိုးတက်မှုနှုန်းကိုမြင်လျှင်ပျော်မွေ့!